FIPARITAHANA ZAVAMAHADOMELINA RN7 : Rongony 8 gony milanja 905kg indray no saron’ny zandary
Manao tohivakana hatrany ankehitriny ny fahatrarana zava-mahadomelina amin’iny lalam-pirenena fahafito iny. 16 août 2019
Tsikaritra ihany fa ao amin’ny Faritra Atsimon’ny Nosy no tena betsaka manao ity afera ity izay efa am-perinasa mamongotra izany ny mpitando filaminana. Ny 11 Aogositra 2019 lasa teo tokony ho tamin’ny 03 ora tolakandro tao Mahasoa Sud Kaominina zazafotsy Distrikan’Ihorombe tamin’iny lalam-pirenena faha 7 iny, ny Borigady tao Ihosy dia nahatratra rongony miisa enina gony izay milanja 885kg tao anaty fiara iray.
Olona 02 no notanana hanovana fanadiadiana mahakasika izany hatreto. Ankoatra izay, ny 13 Aogositra 2019 lasa teo raha nanao fisafoana ny avy ao amin’ny Borigady avy ao Fianarantsoa dia nahatratra rongony milanja 20kg tao anaty fiara taksiborosy iray mampifandray an’Ihosy sy Fianarantsoa izay natao tao anaty gony miisa roa. Olona 2 raha teo koa no notanana hanaovana fanadihadiana no sady nogiazana ny fiara nitondra izany amin’izao fotoana izao.